MacOS Monterey Yeruzhinji Beta 2 Yave Kuwanika | Ndinobva ku mac
MacOS Monterey Veruzhinji Beta 2 Yave kuwanikwa
Jordi Gimenez | 11/11/2021 09:41 | macOS Monterey
Chirongwa che public beta versions Apple inoenderera mberi munzira yayo uye kubva panguva yekutanga yakabata zvakanaka pakati pevashandisi. Muchiitiko ichi, mavhezheni ebeta evagadziri akaburitswa mazuva mashoma apfuura atova neshanduro yavo yeruzhinji beta iripo. Izvi zvinoreva kuti vese vashandisi vanoda vanogona kudhawunirodha idzi beta vhezheni vodziisa pamakomputa avo.
Beta vhezheni dzinowanzo wedzera kuvandudzwa kwakakosha uye maficha matsva mukudzikama nekuchengetedzeka. Nekune rimwe divi, zvinogoneka kuti Apple inowedzera kumwe kuvandudzwa mukushanda kweiyo system ine zvinhu zvitsva zvakaita seSharePlay muFaceTime. Ichi chingave chikuru chitsva cheiyo inoshanda sisitimu mune iyi beta vhezheni yakaburitswa neApple, yechipiri kubva kuMacOS Monterey 12.1.
Kufambira mberi kwakakosha neiyi yeruzhinji beta chirongwa
Kutenda kune betas, iyo inoshanda sisitimu inogara ichibuda zvirinani uye zvino zvakanyanya. Kune vakawanda vashandisi vanoisa idzi shanduro uye naizvozvo iyo "mhinduro" iyo Apple inogamuchira pavari yakakwira zvakanyanya saka pakupedzisira tose tinokunda.
Kusvika kweaya mavhezheni eruzhinji evashandisi veMac akachinja maonero eavo vakadhawunirodha mavhezheni ekuvandudza uye zvino hazvifanirwe kuita chero izvo. Apple inoita kuti iwanikwe kune vese vanoda kuyedza beta vhezheni chikamu chewebhu chekudhawunirodha nekuiisa. Iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti kuisa idzi beta vhezheni kunogona kureva kuve nedambudziko chairo neapp kana chishandiso, asi ichokwadi kuti izvi hazviwanzoitika uye kana zvikaitika. unogona kugara uchibvisa beta vhezheni kubva kuMac yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Monterey » MacOS Monterey Veruzhinji Beta 2 Yave kuwanikwa
Edward Norton anojoinha mutambi weakateedzera Extrapolations yeApple TV +
Apple ichavhura Apple Store nyowani muLos Angeles munaNovember 19